4 Nkọwapụta R Rọpụtara Jiri ihe nkiri Ụlọ ọrụ Hollywood kpoo PG-13
TV & Nkiri Ihe nkiri
4 Nkọwapụta R Rịpụtara Gaa na PG-13 site na Ụlọ nka
Iberibe Mmekọahụ na Ime Ihe Ike na Nlekọta Ụlọ Ọrụ Dị Mma
Nye ndị na-erule afọ 17, ihe nkiri fim abụghị ọtụtụ nchegbu. Ma na ụlọ ọrụ Hollywood, ihe nkiri fim dị oké mkpa otú otu fim pụrụ isi rụọ ọrụ n'ọfịs. Ya mere, ọ bụrụ na onye nduzi emee ihe ngosi nke R, ụlọ ọrụ nwere ike ikpebi ịkpụ mmemme mmekọahụ na ime ihe ike iji jide n'aka na e nyere fim ahụ PG-13 na MPAA .
Ọ bụ ezie na ndị na-ese ihe nkiri nwere ike ịchọrọ echiche nke ụlọ ihe nkiri na-ese ihe nkiri iji nweta ọnụ ọgụgụ dị ala, ụlọ ọrụ ahụ nwere data nke kwadoro na fim ndị PG-13 nwere ike ime ka ego karịa fim R. Dịka ọmụmaatụ, e gosiri PG-13 ihe osise kachasị elu kachasị elu 10 kachasị elu n'ime oge niile kachasị elu na ntanetị ọ bụla, ọ dịghịkwa ihe nkiri R Rọpụtara nke dị n'elu 25 (ihe nkiri R-rated kasị elu bụ 2006 bụ The Passion nke Kraịst , nke mebiri $ 370.7 na ụlọ ọrụ US).
Na-eche na e nwere ọtụtụ nde ndị na-ese ihe n'okpuru afọ 17 na ndị nne na nna na-enwekarị obi ụtọ na-akpọrọ ụmụ ha na fim PG-13 karịa fim R-egosipụtara site na arịrịọ ahụ jụrụ 20th Century Fox ịhapụ nsụgharị PG-13 nke Deadpool maka ndị na-eto eto eto eto), ndị isi ụlọ ọrụ ọfịs ahụ nwere uche. Ma ihe ịga nke ọma nke Deadpool (ụlọ ego $ 363) na-adịbeghị anya nwere ike ime ka ụlọ ọrụ gbanwee obi ha banyere ndị na-arụ ọrụ na R-rated.
Ihe nkiri anọ a sochiri ya site na studio iji jide n'aka na ha ga-anata ọkwa PG-13.
Na-ebi ndụ ma ọ bụ na-anwụ anwụ (2007)
Ihe mbụ nke Die Hard - 1988 Hard Hard , 1990 bụ Hard Hard 2 , na 1995 na- agwụ ike na ịbọ ọbọ - na-atụle R. Mgbe 20th Century Fox kpebiri ịnọgide na aha mgbe a 12 afọ ezumike na 2007 si Live Free ma ọ bụ Ọnwụ Ike , ụlọ ọrụ ahụ wepụtara ya dị ka ihe nkiri PG-13 iji gbalịa ịzụkwuo tiketi.
Ndi nnochi nke akwukwo dika ndi kpakpando bu Bruce Willis, nke bu na, Willis enweghi ike ikwuputa ihe odide nke onye ozo na fim ("Yippee-ki-yay, mother ----" - a na-ejide ụda egbe na fim). Otú ọ dị, onye nduzi bụ Les Wiseman gbara nsụgharị abụọ nke ihe nkiri ụfọdụ na-enweghị nkwarụ. Edebere ihe ndị a n'ime fim ahụ maka "Unrated version" nke a tọhapụrụ na DVD.
The ịgba chaa chaa akwụ ụgwọ maka Fox n'ihi na Free Free ma ọ bụ Die Ike ghọrọ ihe kasị njọ Hard Hard movie na US igbe igbe (adịghị mgbanwe maka onu oriri). Afọ isii ka nke a gasịrị, ihe nhụsịrị nke ọzọ na- anwụ anwụ , 2013 bụ Ezi Day na-anwụsi Ike, weghachite usoro a na Right na, dị ka Fox buru n'amụma na 2007, ọ bụghị rụọ ọrụ dịka PG-13 Live Free ma ọ bụ Na-agwụ ike .
Okwu Eze (2010)
Ụlọ ọrụ Weinstein
Ihe ngosi akụkọ nke afọ 2010 Okwu Eze , bụ nke metụtara usoro ọgwụgwọ nke Eze George VI nke Briten, enweghị ihe ike, ọkpụkpụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla "na-abaghị uru." E depụtara R maka naanị otu usoro - ọhụụ dị egwu nke Colin Firth's George VI na-akpọ ọnụ ugboro ugboro n'ọgba aghara na nsogbu okwu ya.
N'izu ole na ole mgbe ihe nkiri ahụ gasịrị na 2011 Oscars, onye na-emepụta ihe nkiri Harvey Weinsten wepụtara nsụgharị R na ndị America na-eme fim ma wepụta nsụgharị PG-13 nke gbanwere okwu rụrụ arụ wee kpọsaa ya dị ka "Ihe omume ezinụlọ nke afọ." Director Tom Okpukpo na kpakpando Colin Firth kwadoro n'ihu ọha na mkpebi Weinstein wepụrụ ihe nkiri censored. E wepụtara P1-13 nke okwu Eze ahụ na ihe nkiri 1,011 ma mebie nanị $ 3.3 na obere oge ya.
Ihe odide mbụ, nke a na-adịghị agbanwe agbanwe nke Okwu Eze bụ nanị otu dị na mgbasa ozi ụlọ.
Ihe ndị a na-emefu 3 (2014)
Dị ka ntụle nke ntụle na Live Free ma ọ bụ nwụọ ọnwụ , 2014 bụ Ihe Ndị Na - emefu Ngwaahịa 3 bụ nanị ihe nkiri na - emepụta aha aha njirimara PG-13 karịa R. Mgbe a mara ọkwa na ndị ọrụ na - eme ihe na - emechu ihu na ihe ga - otu ihe ike dị ka ihe nkiri ndị ọzọ na usoro. Ná mmalite, onye edemede na star Sylvester Stallone kwadoro mkpebi ikpe ahụ site na ụlọ ọrụ ahụ, na-ekwu na ma ya ma studio nwere olileanya na ọnụ ọgụgụ dị ala ga-eme ka fim ahụ ruo ndị na-ege ntị.
N'ihi mbipụta dị elu nke ịse ihe nkiri ahụ na Intaneti izu atọ tupu ịtọhapụ na enweghị afọ ojuju na ọnụego, The Expendables 3 bụ ihe ịga nke ọma na usoro nchịkọta nke ndị nkatọ na n'ọfịs igbe. Stallone esitela na ya kweta na ọ bụ ndudue ma kwe nkwa na a ga-edepụta R na-eme atụmatụ atụmatụ ihe eji eme atụmatụ. Na Stallone emesị kpebie megide starring na nke atọ, o yiri ka usoro a ga-ejigide ihe nkiri PG-13.
The 2015 spy comedy Mortdecai starring Johnny Depp bụ otu n'ime nnukwu flops nke afọ ahụ. O doro anya na Lionsgate chere na otu n'ime ihe ndị ahụ bụ fim R-rating, bụ nke nwere ike igbochi kpakpando star Depp ka ọ ghara ịhụ fim ahụ. N'ebe a na-emegharịghị anya, mgbe Mortdecai tọhapụrụ na VOD Lionsgate wepụtara ihe nkiri PG-13 nke ihe nkiri ahụ ma kọwaa ya site n'ịsị, "Ọbụna ndị na-ahụ egwu nwere ike ịnweta ọhụụ na mkpirikpi PG-13 nke ihe nkiri ahụ."
Ọ bụ naanị Mortdecai nke R-rapụtara na mgbasa ozi ụlọ, mana nsụgharị PG-13 ka dị na VOD na ọrụ ndị ọzọ na-asọ asọ. Ka o sina dị, o yighị ka Lionsgate ahụ meriri nnukwu mfu ya na Mortdecai na nsụgharị ala.
5 Sequels Sere Na-eme Site na Ahịa DVD
Interview Nkwekorita nke Queen nke "300" - Lena Headey
Ihe nkiri Franchises: Esemokwu dị n'agbata Sequels, Reboots na Spinoffs
Nyocha Movie, 2001 - 2015
Kedu ihe nkiri dị na 'Twilight' Saga?
Ònye na-ede ihe na 'Walk the Line' Movie Soundtrack?
"Chi nke Ijipt": Ihe Ngbazi Na-ewute Nsogbu Maka Ụwa Oge Ochie
Ònye na-ede ihe na 'Dreamgirls' Movie Soundtrack?
Ezigbo ọduọ ọhụụ nke 6 kachasị
Top 10 Bad Badses na Movies
Ihe mere Disney ji etinye ụkwụ na 'Wild Hogs' 2 '
Geography nke Sri Lanka
Jan Stephenson Brought Glam ruo n'afọ 1980 LPGA Tour
Akụkọ banyere Hershey's Chocolate and Milton Hershey
Ndị na-agba mmiri maka ụbọchị mbụ nke ụlọ akwụkwọ elementrị
Ihe ngosi na ihe omuma
Kedu Mgbe Nkwụ Nkwụ?
Etu esi agba
Ihe mere Argentina ji anabata ndị omekome Nazi Agha Ụwa nke Abụọ
Ọchịchị Johnson State College
Mụta okwu French "Coucou"
Ihe Nlereanya Anya Kachasị Elu
Kedu ihe ndị Kennewick Nwoke na-arụ?
UPC GPA, SAT na ACT Data
Ịrụ Monologue maka Drama Class
Echiche Ụgha: Atheism enweghi ike ịkọwa mmalite nke Eluigwe na Ala
Otu esi emezi ihe eji eme ka ugbo gi di na ala gi
Antarctica: Windo na Cosmos
Ebumnuche Ebumnuche maka Mgbasa Mgbochi Mmalite nke Mbụ
Top Dephi components iji nweta MySQL
Ebee ka JFK Gaa n'ụlọ akwụkwọ?
Banyere Ụlọ Nzukọ Alaeze na Broadmoor World Arena na Colorado Springs
Mkpụrụ Igwe Eji Mkpụrụ Obi: Ụdị Nhazi Ọhụrụ
Otu esi ejikọta "kọwaa" (iji kọwaa) na French
Godfrey nke Bouillon
The Deutsche Mark na ya Legacy